In Burmese: HISTORY, ISSUES and TRUTH in ARAKAN by Rick Heizman - issuu
မြန်မာနိုင်ငံAနောက်ပိုင်းရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် မြန်မာနိုင်ငံကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့AခြေAနေတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာလုပ်ကြံဖန်တီးဖော်ပြထားတာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော့်မှာတော်တော်ကိုစိတ်Aနှောက်Aယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။လူတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံAကြောင်းကို တော်တော်သိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့ Aမှန်တရားကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတာမြန်မာပြည်Aနောက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ရဲ့ တကယ့်Aကြောင်း Aရင်းတွေနဲ့ Aမှန်တရားကို ရှင်းပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာလဲ Aဲဒီ ဒေသရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တကယ့်Aတွေ့AကြုံတွေAပေါ်မှာ Aခြေခံထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်လတုန်းက) Aဲဒီနေရာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ _____________________________________________________________________________________________ ရခိုင် - (Rakhaing ဟု Aသံထွက်သည်) Arakan ဟုလည်း ခေါ်ကြခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ယU်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ စကားနဲ့ လူမျိုးနွယ်ဖွဲ့တည်မှုရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဇာတိမြေတွင်သမိုင်းAစU်Aဆက်နေထိုင်ပေါက်ပွားလာခဲ့ရာ ထိုဒေသရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ - များမကြာမီကပင် နိုင်ငံကူးပြောင်းဝင်လာပြီး သူတို့ကို Aရင်တုန်းက ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (သို့) စစ်တကောင်း မူဆလင်များဟု ခေါ်သည်။ (သူတို့၏ ဇာတိဇာစ်မြစ်ကို ညွှန်ပြထားပြီးသားဖြစ်သည်။) ရခိုင်ပြည်နယ် - မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နှစ်ခုကြားရှိ ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ စစ်တွေဖြစ်သည်။ ယခင်က Akyab ဟု ခေါ်သည်။ Aကြီးဆုံးသော သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းAကျဆုံးနေရာမှာ (မြောက်ဦးမြို့)ဖြစ်ပြီး (၁၄၃၀ မှ ၁၇၈၄)ခုနှစ်Aထိ ယခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထိAုချိန်က Aာရှတိုက်တွင် Aချမ်း သာဆုံးမြို့တော်များထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်လာသော နိုင်ငံAသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလAစက ရှေးခေတ်က Aိန္ဒိယလူမျိုး ဟိန္ဒူ (သို့) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မင်းဆက်Aမျိုးမျိုး နန်းစိုက်စိုးစံခဲ့သော ဒေသ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ စစ်နိုင်၍ Aစ္စလာမ်ဘာသာကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ပိုင်Aိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် Aရှေ့ပါကစ္စတန်Aဖြစ် Aနောက်ပါကစ္စတန်နှင့် နယ်နိမိတ်မိုင်တစ်ထောင်ကျော် တွဲဆက်လျက် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီး ၁၉၇၁ တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်Aမည်ဖြင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ _______________________________________________________________________________________________
Aမှန်တရား၏ ဇာစ်မြစ် တကယ်တော့ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေ ရဲ့ ရိုး ရာယU်ကျေးမှု ကျနစွာရာစုနှ စ်ေ ပါင်းများစွာနေထိုင်လာခြဲ့ ကတဲ့မွေးရပ်ဇာတိပြည်နယ်ကြီးကို ရက်စက်လှတဲ့ AစီAစU်တွေချပြီး တခြားလူမျိုးနဲ့ ဘာသာတရားမမျှတမှု ရပ်တည်ရန် ခွင့်ပြုမှု မရှိဘဲ Aစ္စလမ်ပြည်နယ်Aဖြစ် Aတင်းAဓမ္မ သိမ်းယူထူထောင်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဤAဖြစ်မျိုးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ မြန်မာပြည်နယ်ခြားမှာရှိတဲ့ မောင်းတောနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာတခြားနယ်မြေနိုင်ငံဒေသတွေကိုဘယ်တော့မှကူးသွားပြီးနယ်ချဲ့လေ့မရှိခဲ့ပါ။ ရခိုင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ရှေးကျလှတဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေမှာသာAစU်Aဆက်နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်လောက်ကပင်ဘင်္ဂါလီတို့ရဲ့Aစုလိုက်Aပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့Aတင်း Aဓမ္မမီးရှို.ခြင်းတွေကို ရွာပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။
ရခိုင်တို့  ဟာမူ ဆ လင် ဘ င်္ဂါလီ တို့  ရဲ့ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာနဲ့  ယ U်ကျေးမှု A ပေါ် မငဲ့ကွက်ဘဲဗု ဒ္ဓ ဘုရားများ ဘု န်း ကြီးကျောင်းများနဲ့  ဗု ဒ္ဓ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာများကိုဖျက် ဆီး ဦးမှာကိုခါးသည်းလှ တဲ့ ယခင် A တွေ့  A ကြုံAရ သိနေခဲ့ပါတယ် ။ Aခုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပြန်လေပြီရော။
AလားတူAဖြစ်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မှာ(လွန်ခဲ့တဲ့ နှစA်နည်းငယ်တုန်းက)ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများAပါA၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူပေါင်း
ခန်.ကို လွဲမှားသော Aယူနဲ့သတ်ဖြတ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ မူဆလင်တို့က ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဦးရေနည်းသွားပြီးတော့ ၊ ထိုင်း နိုင်ငံေ တာင် ပို င်း ကိုလွ တ်လ ပ်သော Aစ္စ လာမ်ြ ပည် န ယ် Aဖြစ် ပြောင်းပစ် ဖို့  ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဖိ လ စ် ပို င်နို င်ငံေ တာင် ပို င်း မှာလည်းခရစ် ယာန် ဘာသာဝင် ဖိ လ စ် ပို င်ြ ပည် သူတို့  ကို AစU် မ ပြတ်ြ ပန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ ဆက်လုပ်ပြီး သီးခြားAစ္စလာမ် သီးသန့်နိုင်ငံဖြစ်လာေAာင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ Aင် ဒို နီး ရှားနိုင်ငံက မူ ဆ လင် မ ရှိေ သာ Aပိုင်း တွေ မှာ လဲ ခရစ် ယာန် ဘုရားကျောင်းတွေ ကို မီးရှို့ ဖျက် ဆီး ခြဲ့ ပီး၊ ခရစ် ယာန် ဘာသာဝင်ကျောင်းသူကလေးများ ကျောင်းတက်ဖို့လမ်းလျှောက်လာရာမှာ ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီး သတ်ခဲ့ကြတယ်။ မကြာသေးခင်က မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေးစစ်ပွဲလုပ်ရန် ပါဝင်ပေးဆပ်ကြဖို့ Aင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးများကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ လွ န်ခဲ့ တဲ့ နှ စ်ေ ပါင်း၅၀ လောက် က ဘင်္ဂ လားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံထဲမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၂၈% ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဟိန္ဒူလူ ထုကို Aတင်းမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိန္ဒူဦးရေဟာ ၉% တောင်မရှိတော့ဘဲနည်းလာပါတော့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေAနည်းစုကို ကြောက်စရာကောင်းလောက်ေAာင်မူဆလင်များကဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစေတီတော်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနဲ့ Aိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ၊ တရားထိုင်တဲ့ဂူတွေနဲ့ ဖျက်ဆီးခံရတဲA့ရာတွေဟာ ဗုဒ္ဓခေတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကတည်းကဖြစ်ပြီး ယခုတော့ လုံးဝ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါပြီ။
သမိုင်းကြောင်းရာဇ၀င် ရခိုင်ဒေသမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ကျော်Aစောပိုင်းေAဒီရာစုနှစ်များကပင်ထီးနန်း၊ဘုရင်များနဲ့သမိုင်းကောင်းAစU်Aလာများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယAကြီးဆုံးမြို့နဲ့ ဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခံခဲ့ကြရတာကတော့ မြောက်ဦးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်တို့ရဲ့ သက်သေပြုရာ ရခိုင်စိတ်ဓာတ်ရှိရာ Aချက်Aခြာမြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Aင်္ဂလိပ်တို့Aုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုတော့ဖယ်လိုက်ပါတော့။Aင်္ဂလိပ်တို့ဘာမှမသိရှာဘဲAခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖန်တီးပေးသလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Aင်္ဂ လိပ်တို့  ဟာမြန် မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် Aခြားနိုင်ငံေ တွ ကို ၀င်ရောက် စ U် က စိုက်ပျိုးရေးနှ င့် စီးပွားလုပ်ငန်းတွေမှာကူလုပ်တဲ့လူတွေAဖြစ် ခိုင်းဖို့ တရုတ်တွေ၊ ကုလားတွေကို ခေါ်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ Aင်္ဂလိပ် တွေဟာ ဘင်္ဂလားက မူဆလင်ကုလားတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ခေါ်သွင်းတာများတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘင်္ဂလား(ဘင်္ဂဒေ့ရှ်)ကနီးလည်းနီးတော့Aဆင်ပြေတယ်။ AဲဒAီလုပ်ကူသူ ဘင်္ဂါလီ မန်နေဂျာများက ဌာနေခံ ရခိုင်လုပ်သားတွေကို ငှားရမယ့်Aစား ထောင်ပေါင်းးများစွာသော မူဆလင် ဘင်္ဂါလီများကို လာပြီးAလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်ယူခဲ့ကြတယ်။
Aဲ ဒီA ချိ န်တုန်း က (၁၈၀၀ ခုနှ စ်ေ နှာင်းပိုင်း ) ဘင်္ဂ လားမှာဒီ ဘ င်္ဂါလီတွေ တော်တော် များများဟာ Aာရေးဘီးယားရဲ့  ဝါဟာဗစ်AတွေးAခေါ်များကိAုခြေခံတဲ့ Aစ္စလာမ်မစ်ဖာရာဒိုင်းလုပ်ရှားမှုရဲ့ Aရှိန်Aဟုန်ေAာက်မှာလွမ်းမိုးခြင်းခံနေရတယ်။ ဒီ Aာရေးဘီးယားရဲ့  ဝါဟာဗစ် AတွေးAခေါ်နဲ့  ဆော် ဒီမျိုးနွ ယ်စုေ တွ က သူ တို့  ကို သူတို့  Aာရေးဘီးယားဆိုတဲ့ နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်၊ Aသေးစိတ်Aနေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုညွှန်ကြားထားတာကလည်း “ရေAရင်းAမြစ်တွေ့လျှင်သူတို့ရဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင် တစ်မျိုးချည်းသာနေရမယ့်ရွာတွေကိုတည်ကြဖို့ဖြစ်တယ်”။ ဒါ့ကြောင့်လည်းသူတို့ဘင်္ဂါလီတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာရေပြင်ကိုနိုင်နင်းလာပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုငြင်းပယ်လာတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်က သူတို့တတွေAင်Aားတောင့်တင်းပြီးAဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုယူဆတဲ့Aခါ ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွဲဖို့ ပြင်ဆင်ကြရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၁၀ ၀န်းကျင်လောက်က Aလုပ်ကူ မူဆလင်မန်နေဂျာ ၁၅ ယောက်ဟာ မောင်းတောမြို့တစ်မြို့တည်းသို့ ထောင်နှင့်ချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီAလုပ်သမားများကို ခေါ်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ Aစပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ လူဦးရေတိုးပွားမှု စတင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မူဆလင်ဘင်္ဂါလီကုလားများရဲ့ လူဦးရေ Aလျင်Aမြန်တိုးပွားနေမှုကို စုံစမ်း စစ်ဆေးရန် ကော်မရှင်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ စုံစမ်းချက်တွေAရ Aကြမ်းဖျင်းAားဖြင့် ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၃၀၀၀၀ လောက်ရှိရာမှ ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ ၂၂၀၀၀၀ ကျော်လောက်Aထိ တိုးပွားလာခဲ့တယ်။ Aဲဒီ ကော်မရှင်က ကောက်ချက်ချပုံများAရ Aားမလျော့စတမ်း ဆက်တိုက် နယ်ခြားနေရာမှာ လုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန်းက ရပ်မပစ်လျှင် (သိ)ု့ ထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင် မကြာမီAချိန်Aတွင်း Aဓိကရုန်းAကြီးAကျယ်ဖြစ်လိမ့်မည်လို. ဖြစ်တယ်။ ကော်မရှင်ရဲ. တွက်ဆချက်ကလည်း မှန်နေခဲ့တယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နေ့များ ၁၉၄၂Aစောပိုင်းမှာဂျပန်တွေဟာရခိုင်ဘက်သို့ခြေဦးလှည့်လာတဲA့ခါ Aင်္ဂလိပ်တို့က“ဘင်္ဂါလီဗီဖို့စ်”လို့ခေါ်တဲ့ မူဆလင်တပ်သားAဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့လက်နက်တွေလည်း သူတို့ကို တပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ Aင်္ဂလိပ်တွေက ဒီဘင်္ဂါလီတွေကို ရခိုင်တွေထက် တိုက်ရေးခိုက်ရေးမှာ လက်ရဲဇက်ရဲတဲ့ သူတွေAဖြစ် မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့Aင်္ဂလိပ်တွေရုတ်တရက်ဆုတ်ခွာရတဲA့ချိန်မှာတော့ဘင်္ဂါလီတွေဟာသူတို့ကိုပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုAလျင်Aမြန်သုံးပစ်ခဲ့ ကြတယ်။ ဘယ်မှာသုံးပစ်ကြလဲဆိုရင်တော့ ဂျပန်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ထောင်ပေါင်း များစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို သတ်ပစ်ဖAို့ တွက် သုံးခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတော ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာတွေ၊ ဘုရားစေတီကျောင်းကန်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို မီးရှို့ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါင်း ၃၀၀၀၀ လောက်ဟာ ဒီတကယ့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာ Aသတ်ခံခဲ့ရပြီး သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကနေ လူမျိုးပြုတ်သကဲ့သို့ စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာတော့ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောဒေသတစ်နေရာလုံးဟာ ဂျပန်တွေ၊ Aင်္ဂလိပ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီးAင်Aားတောင့်တင်းနေတဲ့ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရောက်ရှိလို့နေခဲ့တယ်။သူတို့တွေဟာ နယ်ခြားဒေသကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့ မူဆလင်တွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ လှုပ်ရှားမှုများဟာကြီးမားစွာတိုးတက်လာခဲ့တယ်။
ဒီနေရာတွေကတော့ ဟိုးAရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာထဲက လုံးဝ နီးပါး ဗုဒ္ဓဘာသာချည်းဘဲ နေလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရုတ်တရက် Aတော်တိုတောင်းတဲA့ချိန်လေးAတွင်းမှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတော်တော်ကြီးကင်းစင်သွားပြီးလုံးဝနီးပါးမူဆလင်တွေသာရှိခဲ့ပါတော့ တယ်။ ပြီးတော့ နယ်မြေချဲ့ဖို့ စီမံကိန်းတွေချပြီး Aဲဒီနယ်မြေတွေကို လုံးဝ မူဆလင်ချည်းသာဖြစ်ေAာင်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တုန်းက Aင်္ဂလိပ်Aရာရှိတစ်ဦးရဲ့ မှတ်တမ်းပြုစုမှုတစ်ရပ်ထဲမှာ…“ဘူးသီးတောင်နဲ့ Aနီးတ၀ိုက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ရွာတွေမှာရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ရက်စက်စွာ Aတုံးလိုက်Aတစ်လိုက်
ကျွ န်ေ တာ့်ကိုပြောပြကြပါတယ် ။ မြောက် ဦးရဲ့  A နောက် ဖ က် က မ်းမှာရှိတဲ့ ရွာAများစု ကို လည်းဘင်္ဂါလီ မူဆ လင် တ ပ် က ဖျက် ဆီး ကြတာတွေ လ ည်းပါပါတယ် ။ “တကယ်တော့ ရန် သူ့ ဂျပန် တ ပ် ဟာဒီ ရွာ တွေ နားကိုတစ် ခါမျှရောက် မ လာခဲ့ပါဘူး” ရာပေါင်းများစွာသော ရခိုင်ရွာ သားတွေ ဟာတောင် ကုန်း တောင် တ န်းတွေပေါ်မှာပု န်းေAာင်းနေခြဲ့ ကရတယ် လို့  ဆို ပါတယ် ။ ဘိုးဘွားစU်ဆက် နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ မွေးရပ်မြေကနေ ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ Aဲဒီက မူဆလင်တွေကို နိုင်ေAာင် ပြန်မတိုက်ထုတ်နိုင်ရန်တော့ သူတို့ဘ၀ဟာ ကယ်တင်နိုင်မဲ့လမ်း မရှိနိုင်တော့ပါဘူး” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဂျပန်တွေ ကို မောင်းထု တ်ြ ပီးတဲ့ေ နာက် မှာ တော့ ရဲဘော် သုံးကျိ ပ်တွင်Aဖွဲ့ ၀ င် ရဲေ ဘာ် တ စ် ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ရ န်ေAာင် ဟာ စစ်တွေဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ဆူပူသောင်းကျန်းသတ်ဖြတ်မှုများကို တားဆီးဖို့ Aတွက် ရခိုင်ဒေသကို လွှ တ်ြ ခင်းခံ ရ တယ် ။ သူ ဟာသူ့  ရဲ့ ရဲဘော်ကောင်းနှ စ်ေ ယာက်ြ ဖစ် တဲ့ ဗိုလ်ရ န်နောင် နဲ့ ဗိုလ်မျိုးညွ န့် တို့  ကို မောင်းတောကိုမူဆလင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် သဘောတူဆွေးနွေးဖို့ လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးစကားပြောမယ့A်စား နှစ်ယောက်စလုံးကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါ တယ်။
သူတို့တွေဟာဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေAဖြစ်လိုချင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့“ဒါရူAစ္စလမ်”လို့ခေါ်တဲ့ Aခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းသွားမယ့်A စ္စ လ မ်နိုင်ငံကို တ ည်ထောင် ချင် ခဲ့ တ ယ် ။ မူ ဆ လင်တွေ ဟာနေရာAနှံ့ ရှိ A ခြားမူ ဆ လင် မ ဟု တ်သူများကိုAပြတ်ရှင်းခဲ့တာနဲA့  မျှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံးဝ Aစ္စလမ်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်ေAာင် ဖန်တီး လာခဲ့တယ်။ Aခု A ချိ န်မှာ တော့ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ဟာဘာAဖြစ် A ပျက်တွေြ ဖစ် ခဲ့ သ လဲ ဆို တာကိုတကယ် သြိ မင် လာရပါပြီ ။ Aကယ် ၍ ဒီAဖြစ်Aပျက်တွေ ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Aသက်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ ယU်ကျေးမှုAမွေAနှစ်တွေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဟာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ် ဆိုတာကို မြင်လာခဲ့တယ်။
ကိုရမ်ကျမ်းက မူဆလင်မဟုတ်သူများရဲ့ မြေတွေယူခြင်းကို တရားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကိုရမ် ၃၃း၂၇ “And, He made you heirs to their land and their dwellings and their property, and (to)aland which you have not yet trodden, and Allah has power over all things.” ကိုရမ် ၂၁း၄၄ “Do they see Us advancing, gradually reducing the land (in their control), curtailing (reducing) its borders on all sides? It is they who will be overcome.” ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Aင်္ဂလိပ်တွေဟာ ပြန်ဝင်လာပြီး ချုပ်ကိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မူဆလင်တွေဟာ သူတို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြန်လာပြီး မွေးရပ်ရွာတွေမှာ ပြန်နေဖို့ကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ သူတို့တွေဟာ Aခုချိန်မှာ သူတို့မှာ “ရှာရီးယားUပဒေ”နဲ့ Aုပ်ချုပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်မူဆလင်ချည်း သီးသန့် နယ်မြေရှိနေပြီလို့ ယုံကြည်နေကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ Aင်္ဂလိပ်တွေ သို့မဟုတ် ဗမာတွေAုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဒီလို လက်ခံမယ့်Aစား နောင်မကြာမီ Aစ္စလာမ်နိုင်ငံ ဖြစ်တော့မယ့် ပါကစ္စတန်ထဲကို ပူးပေါင်းဝင်ရောက်ဖို့ စီစU်ခဲ့တယ်။ Aင်္ဂလိပ်တွေက ဗမာတွေကို လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့Aခါမှာတော့ “ဂျာမီAာတူလ်Aယ်လီမာAီAစ္စလာမ်ပါတီ”လို့ Aမည်ရတဲ့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များ Aဖွဲ့ဟာ မကြာမီဖြစ်ပေါ်တော့မယ့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး
သူ ပုန်တ ပ် ဖွဲ့  တ စ် ခုကိုဖွဲ့ စ ည်းခဲ့တ ယ် ။ Aဲ ဒီသူပုန်တ ပ် ဖွဲ့  ကို ဖွဲ့ စ ည်းရတဲ့A ကြောင်းကတော့ ရခိုင်ြ ပည် န ယ် ကို သိ မ်း ယူြ ပီးပါကစ္စတန်Aရှေ့ပိုင်း (ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ၁၉၄၆ မှာတော့ သူတို့တွေဟာ “မူဆလင်များလွတ်မြောက်ရေးAဖွဲ့Aစည်း” (Aမ်Aယ်လ်Aို)ကို ဖွဲ့စည်းပြီး သူတို့ရဲ့ စစ်ပွဲကို စတင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၈ မှာ သူတို့တွေဟာ ပါတီရဲ့ နာမည်ကို မူဂျာဟစ်ပါတီလို့ပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ “မူဂျာဟစ်သူပုန်”Aဖွဲ့Aဖြစ် သိလာရတယ်။ မူဂျာဟေဒင်ဆိုတာကတော့ Aစ္စလမ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲမဲ့ မူဆလင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများလို့ Aဓိပ္ပါယ်ရ တယ်။) ဂျီဟတ် = Aစ္စလမ်ဘာသာ၏ ဘာသာရေးစစ် ၁၉၄၇ ခုနှ စ်၊ သြဂု တ်လ မှာရခိုင်ြ ပည် န ယ် ၏ မင်းကြီးကသူ့  ရဲ့ လ က်ေAာက် ၀ န် ထ မ်းတစ်ယောက် မူ ဆ လင် များရဲ့  ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုကို ခံရတဲ့Aခါသတင်းမှတ်တမ်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးခဲ့တယ်။Aဆိုပါသတင်းမှတ်တမ်းမှာ သူရေးထားတာကတော့ “လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တဲ့ လူတွေဟာ မူဆလင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ခိုင်းစေထားတာ”လို့ သံသယ ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Aဲဒီလူတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ မူဆလင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဒီနယ်မြေတစ်ခုလုံးကို နှိပ်ပစ်မယ်၊ Aနိုင်ယူမယ်ဆို တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ဗမာAစိုးရရဲ့ UပဒေAရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတော ဒေသမှာရှိတဲ့ မူဆလင်ထုက တိုက်ရိုက်ရန်စပျိုး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်Aသွင် ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ဒီလိုAစိုးရAပေါ် Aလွန် Aကောက်Aကြံများပြီး Uပဒေ မလေးစားမှုတွေကို ဗမာAစိုးရက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် Aရေးတယူ မတု န့်ြ ပန် ၊ မဆက် ဆံဘူးဆိုရ င် ဒီပြောင်းရွှေ့  လာတဲ့မူ ဆ လင် A ဖွဲ့ A စည်းထုြ ကီးက ဒီဒေသကိုဖြစ် ခါစ ပါကစ္စတန်နဲ့ပေါင်းစည်းဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့Aခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့Aခါ ဒီမူဆလင်တွေ Aတွ က်မ ဟု တ်ြ ပန် ပါဘူးလေ။ ဒီတော့ သူတို့  မှာ Aစီ A စU်တွေ ရှိ ခဲ့ြ ပီးသားဖြစ် ပါတယ် ။ ၁၉၄၈ခုနှ စ်၊ ဇန် န ၀ါရီ လ (၉)ရက်နေ့ မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံAစိုးရAသစ်ထံ မူဂျာဟစ်ပါတီကစာတစ်စောင်ပို့ပါတယ်။Aဲဒီစာမှာတောင်းဆိုထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာပါတာတွေကတော့-(၁)ကုလားတန်မြစ်နဲ့နတ်မြစ်ကြားမှာရှိတဲ့နယ်မြေEရိယာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မူဆလင်Aမျိုးသားကိုယ်ပိုင်မြေဌာနေAဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရ မည်။(Aဲဒီဒေသမှာသူတို့တွေကလွန်ခဲ့သော၆နှစ်ကပင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များAမြစ်ပြတ်ကင်းမဲ့ေAာင်ရှင်းလင်းထားပြီးဟုဆိုတယ်) (၂)မူဂျာဟစ်ပါတီကိုဗမာAစိုးရAသစ်မှာတရားဝင်Aဆင့A်တန်းဝင်ရေးAတွက် ဗမာ့Aစိုးရသစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး AဖွဲA့  စည်းတစ်ရပ်Aဖြစ် AသိAမှတ်ပြုပေးရမည်။ (၃) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစွာကို သတ်ဖြတ်မှု၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးများနှင့် ကျေးရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု များကြောင့် ဖမ်းဆီးပြီး AကျU်းချခံထားရသော မူဂျာဟေဒင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူများကို ခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရမည်။”တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာနိုင်ငံဗဟိုAစိုးရသစ်မှာလဲဗိုလ်ချုပ်ေAာင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရခြင်းAတွက်မနည်းAဖတ်ဆယ်နေရတဲ့Aချိန်မှာ Aဲဒီရာဇသံပြင်းပြင်းတောင်းဆိုချက်တွေ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ မြောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင်တွေကချက်ခြင်း Aမြန်ပဲ ဗမာနိုင်ငံကို ဂျီဟတ်လိုခေါ်တဲ. ဘာသာရေးစစ်ကြေငြာလိုက်ပါတော့တယ်။ မူ ဂျာဟေဒင်တွေ မှာ Aတွ င်း စိ တ်ယုတ်က န်းလှ တဲ့ စီမံကိန်း တစ် ခုထွက်ေ ပ်ါလာပြီးမောင်းတောမြို့ န ယ်မြောက် ပို င်း မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျေးရွာများAားလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။(၄င်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့သော၆နှစ်ကပင်ဖျက်ဆီးသုတ်သင်ပြီး ဖြစ်တယ်။) ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ (Aာဇာနည်နေ့)မှာ ငပြုချောင်းနှင့် Aနီးတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ တယ်။ ပြီးတော့ နည်းလမ်းAသစ်Aနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများကို ပြန်ပေးဆွဲခဲကြတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ ငွေ(သို့) သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ AနေAထား၊ မရလျှင် ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုမှ မှားယွင်းစွာ ပြဿနာကို မီးမွှေးခဲ့မိပုံ ၁၉၅၀,၁၉၆၀,၁၉၇၀ခုနှ စ်များမှာမြန် မာပြည် ဟာနိုင်ငံေ ရးရှု ပ်ေ ထွးမှုတွေ ၊ Aချင်းချင်းAချင်းများတိုက်ခို က်မှုေ တွ ၊ ကွန်မြူနစ်သူပုန်ထမှုတွေ၊ရောင်စုံသူပုန်တွေနဲ့ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီးရှင်းမရလောက်ေAာင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။(ဗိုလ်ချုပ်ေAာင်ဆန်းလုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၇ခုနောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်နေ၀င်းကAသာစီးရနေရာယူလာခဲ့တယ်) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ လုံးဝ ပြိုလဲသွားမဲ့ Aန္တရာယ်ကနေ ထိန်းချုပ်မှုရလာခဲ့စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဦးနုAတွက်တော့ ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်ရသလို Aသည်းAသန်AခြေAနေ ရောက်ခဲ့တယ်။ ဦးနုကို လွှတ်တော်မှာ AယုံAကြည်မရှိAဆိုကို တင်သွင်းပြီး သူ့Aာဏာကို ခွာချဖို့ ထုတ်ပြန်စာထွက်ခဲ့တယ်။ သူဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သူရနိုင်သမျှAကူAညီတွေလိုနေပြီလေ။ ဦးနုဟာ ပါလီမန်မှာ ရခိုင်လွှတ်တော်Aမတ်တွေကို Aားကိုးလို့ မရခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဦးနုကို မထောက်ခံဘဲ ဆန့်ကျင်ကြလို့ပါပဲ။ Aဲဒီတုန်းက လွှတ်တော်မှာ မူ ဆ လင် တ ချို့ ရှိ တ ယ် ။ ဦးနု ဟာသူ့  ကို ယြုံ ကည်ြ ပီးထောက် ခံမဲရ ဖို့ Aဲ ဒီမူဆ လင်တွေ Aတွ က်ဘာမဆိုသူ လုပ်နို င်သ မျှAကူAညီပေးချင်နေတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဦးနုရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းကွက်ကြည့်တတ်တဲ့ Aစိုးရဟာ ထောက်ခံမဲပွတ်ခါသီခါနဲ့ Aနိုင်ရ ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် သူနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတော့ သူက မူဆလင်တွေ၊ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ တခြားမဲAချို့ကို ရလိုက်လို့ပါပဲ။ သူ ဒီမဲတွေရဖို့ မွန်တို့ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ Aရှေ့ပိုင်းမှာ မွန်ပြည်နယ်တွေ ဖန်တီးပေးမယ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့Aနောက်ပိုင်းမှာတော့ မူဆလင်ပြည်နယ် တွေတည်ထောင်စေမယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များကို နိုင်ငံသားပြုခွင့်ပြုမယ်လို့ ကတိပေးလို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။ (AဲဒီAချိန်တုန်းက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ AသုံးAနှုံးကို လူလည်း မသိ၊ Aသုံးလဲ မပြုခဲ့ကြပါ) ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့မှာ ဦးနုက မူဂျာဟစ်သူပုနA်ားလုံးကို လက်နက်ချကြပါလျှင် AခွငA့် ရေးပေး မည်လို့ ကမ်းလှမ်းမှု လု ပ်ခဲ့ တ ယ် ။ တချို့ မူဂျာဟစ်တွေ က လက် န က် ချကြတယ် ။ တချို့ က တော့ နိုင်ငံသားပြုမှု ကို တောင်းဆြို ကတယ် ။ ဒါပေမဲ့AခြားAဖြစ်Aပျက်တွေဟာ လျင်မြန်စွာဘဲ ဖြစ်ပျက် ခဲ.တယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာတော့ ဗမာတပ်မတော်က Aဆင့်မြင့်စစ်Aရာရှိတွေက ဦးနုရဲ့နေAိမ်ကိုသွားပြီး စစ်တပ်နဲ့ဆန့်ကျင် မှာလား သို့မဟုတ် Aာဏာစွန့်လွှတ်ပြီး စစ်တပ်ကို AာဏာလွှဲAပ်မလားဆိုတဲ့ ရာဇသံ သတိပေးခဲ့တယ်။ (ဦးနုမှာ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်ရင် AကျU်းကျခံရ (သို့) Aသတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်)။ တကယ်တော့ စစ်Aရာရှိများဟာ လေဆိပ်နဲ့ မြို့နယ်တွေနဲ့ ၁၀ မိုင်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ Aဆင်သင့် တပ်စွဲထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနုမှာ ရွေးချယ်စရာ မရှိလေပြီ။ သူ့မှာ Aာဏာလည်း မရှိတော့ပြီမို့ သူ့ရဲ့ပြည်နယ်ပြုပေးရေး၊ နိုင်ငံသားပြုပေးရေး တွေလည်း ကင်းဝေး ပျောက်ကွယ်ပြီပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ် Aိမ်စောင့A်စိုးရက Aာဏာသိမ်းယူခဲ့ ပြီး (၂)နှစ်Aတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ကတိပေးထားတဲ့Aတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ Aဲဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း တကယ်တော့ ဦးနုကို Aာဏာပြန်ပေးဖို့ ဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးနုက သူ့ကို Aမြန်မဲပေးခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရပြီလေ။ ဦးနုက မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ မြန်မာ့ရေဒီယို (Voice of Burma) ကနေ ပုံမှန်AစီAစU်တစ်ခုAနေနဲ့ ဘင်္ဂလီဘာသာစကားနဲ့ Aသံလွင်မှုကို Aတင်းလုပ်စေပြီး သူ့ကို AကူAညီပေးခဲ့တဲ့ မူဆလင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသကြေနပ်ေAာင် လုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေဟာပို၍ပို၍လိုချင်လာကြတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေက မြန်မာလူမျိုး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ရရှိလိုကြောင်း တောင်းဆြို ကတယ် ။ မူ ဆ လင် ဘာသာဝင် သူေ တွ က သာ ထိ န်း ချုပ် ရ မဲ့Aထူးနယ်ြ ခား နယ်မြေ မောင်းတောမြို့ ကို ဦးနု က ထူထောင်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကြက်ခြံကို မြေခွေးAစောင့်ချခိုင်းသလို၊ ယခုလို နယ်ခြားဒေသကို မူလဆင်များက ထိန်းချုပ်လာနိုင်စေဖို့ပေါ့။ ယခုAခါမှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကချင်၊ မွန်၊ ပAို့၊ ချင်း၊ ပလောင်စတဲ့ ဇာတိမြေမှာ မွေးတဲ့ဌာနေခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ်စုတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး AသိAမှတ်ပြုခံရ စေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒါမှသာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ပြုခြင်းAတွက် တရားဝင်မယ်လေ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ဘင်္ဂါလီ မူဆလင် (သိ)ု့ စစ်တကောင်းမူဆလင်AသုံးAနှုံးတွေကို သုံးရမဲ့Aစား ရေဘုယျAနေမျိုးနဲ့ “ရခိုင်မူဆလင်များ” လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာခဲ့ပြီး၊လူတွေနားလည်မှုလွဲေAာင်ဆွယ်ယူပြီးကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကသူတို့ကိုရခိုင်မှတ်တမ်းဝင်Aသိမှတ်ပြုတစ်ရပ်
Aဖြစ် ယုံလာစေဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒီမှာ ထင်ရှားနေတဲ့ ပြဿနာ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ တခြားတခြားသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်ခြင်းတွေမှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဇစ်မြစ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဇာတိမြေရဲ့ သမိုင်း ကြောင်းရှည်ဆိုတာရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်မူဆလင်လို့ဆိုတာတွေ မရှိကြပါဘူး။ သူတို့တတွေဟာ တစ်ဖက် နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ လူလှိုင်းကြီးတွေထဲက ပေါက်ပွားလာခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့လူမျိုးတွေဟာ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့သူတွေကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ကြပြီး ဌာနေခံဇာတိမြေက လူတွေဆီက Uစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ မြေယာတွေကို လုယူခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မှာ Aစ္စလာမ်ချည်း သီးသန့်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်က သူတို့ရဲ့ မူဆလင်လူမျိုးတွေAတွက် ဆွေးနွေးပြောဆိုစရာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခAုနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာနိုင် စရာAကြောင်း မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ဇာတိမြေက တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စAုဖြစ် AသိAမှတ်ပြုရေးAတွက် သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လေ။ ဤကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ ဇာတိချက်ကြွေဌာနေခံ ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းလည်း ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို၊ မကြာသေးခင် က မှ မျိုးဆက် တ စ် ဆ က် (သို့ ) နှ စ်ဆ က် မျှ ပြောင်းရွေ့  ၀ င် လာကြတဲ့သူ တို့  တ တွေ ဟာဤမြန် မာမြေမှာAခြေချနေကြရုံနဲ့လည်း မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်စု တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တာကို လုံးဝ ရှင်းပါတယ်။ Aဲ ဒီမှာ “ရခိုင်မူဆ လင် ” ဆိုတဲ့ Aခေါ်Aဝေါ်Aသုံး Aနှု န်း ကိုAကောက် ဉာဏ် ဆ င် တဲ့ရ ည် ရွယ်ချက် နဲ. သုံး ခဲ့ေ ပမဲ့လ ည်းမေAာင်မြင်ခဲ့တော့ Aခု “ရိုဟင်ဂျာ” Aခေါ်Aဝေါ်ကို စတင်သုံးကြပြန်လေပြီကော။ ဦးနုကAာဏာရရှိရေးAတွက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တာရော၊သူပြုခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ်တွေရော၊ သူကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် မေAာင်မြင်လာတော့ မဖြည့်စွမ်းနိုင်ခဲ့ပါချေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ဤAခြေAနေကို Aကြောင်းပြလျက် စင်ပေါ်ကို စစ်တပ်ေAာင်ပွဲတင်ပြီး Aာဏာကို သိ မ်း ယူ ခဲ့ တ ယ် ။ ဖွဲ့ စ ည်းပုံကို ဖြုတ် ချပြီး၊ မြန် မာရေဒီ ယို A စီ A စU် မှာ ဘင်္ဂါလီ ဘာသာနဲ့  မွ န်ဘာသာနဲ့  ထု တ်လွှင့်ြ ခင်းကိုပါချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဦးနုကိုလည်း ထောင်သွင်းAကျU်းချခဲ့ပါတယ်။ ဒီ့နောက် “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ Aမည်လဲ (၁၀)နှစ်လောက် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
“ရိုဟင်ဂျာ”တို့၏ လုပ်ကြံတီထွင်မှုနှင့် သမိုင်းကြောင်း Aထောက်Aထားကို ဉာဏ်ဆင်လှည့်ဖြားရေးသားမှုများ ၁၉၅၀ ခုနှ စ်A တွ င်း မှာတော့ “ရိုဟ င် ဂျာ”ဆိုတဲ့ Aခေါ်Aဝေါ်ဟာပေါ်ပေါက် ခဲ့ တ ယ် ။ Aဲ ဒီA ခေါ်Aဝေါ်ဟာ ဒေသတ၀ိုက်ကို စတင် ပျံ့ နှံ့ လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့  ဘင်္ဂါလီ မူဆ လင် (သို့ ) စစ် တ ကောင်းမူ ဆ လင် ဆို တဲ့ Aခေါ်Aဝေါ် တွေ ကို Aစားထိုး တဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြာတဲA့ချိန်ရောက်မှ Aများသိတဲ့ နာမည်တစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက မူဂျာဟစ်သူပုန်တွေကို နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ Aဲဒီလိုနဲ့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ မူဆလင်တွေAတွက် ဇာတ်လမ်းAသစ်တစ်ပုဒ်လိုလာပြီဆိုတာကို သတိထားမိလာတာနဲ့Aမျှ ဘ၀Aသစ်Aဖြစ် လက်ခံခဲ့ပြီး Aခုဆိုရင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ရိုဟင်ဂျာ”လို့ ခေါ်နေကြပြီ။ ဒီ စာလုံး Aခေါ်Aဝေါ်သစ် က “သတင်းမီ ဒီယာနှ င့် Aထောက် A ထား”တွေ ကို သေချာကိုင်တွယ်ဖို့  ပိုမို လွယ်ကူလာတယ် ။ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်နဲ့ စစ်တကောင်းမူဆလင်ဆိုတဲ့ Aခေါ်Aဝေါ်တွေက သူတို့ဟာ ဗမာပြည်ပကလာတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေ ဘင်္ဂါလီ သို့မဟုတ် စစ်တကောင်းမှာ Aခြေစိုက်လာခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ “ရိုဟ င် ဂျာ”ဆိုတဲ့ နာမည် မှာ Aခြားတူ တဲ့ Aဓိ ပ္ပါယ် မ ရှိဘူး ။ ဒါ့ကြောင့်Aဲ ဒီနာမည် က သူ တို့  ရဲ့ “သမိုင်း သစ် ” ကိုဖြန့်  ဖို့  ပိုပြီးလွယ်ကူစေခဲ့တယ်။ Aဲဒီ “သမိုင်းသစ်”မှာ သူတုိ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ Aမှန်တကယ်ပဲ ဒီနယ်မြေတွေမှာ နေထိုင်ကျက်စားလိုတာ Aလွန့်Aလွန်ကြာမြင့်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မုန်းရသလဲ၊ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဘာကြောင့် မကူညီတာလဲ ၁၉၄၈ ခုနှ စ်မှာ Aိန္ဒိယ နိုင်ငံကို လွ တ်လ ပ်ရေးပေးတော့ Aိန္ဒိယ Aရှေ့  ဘ က်ြ ခမ်းနဲ့  Aိန္ဒိယ Aနောက် ဘ က်ြ ခမ်းဆြို ပီးမူဆလင်ဒေသနှစ်ပိုင်းရှိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Aဲဒီနှစ်ပိုင်းဟာ ပူးပေါင်းထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပါကစ္စတန်ရဲ့ Aစ္စလာမ်နိုင်ငံ တစ်ခAုဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ (Aဲဒီမူဆလင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတောင် ကိုယ်တိုင်ပြဿနာရှာခဲ့တယ်) နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ကြားက တင်းမာမှုတွေ ပြင်းထန်လာပြီး သွေးချောင်းစီးတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော် Aရှေ့ပိုင်းဟာ Aင်Aားကြီးတဲ့ Aနောက်ပိုင်းက လွတ်လပ်ရေးရသည့်တိုင်ေAာင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ Aရှေ့ဘက်Aပိုင်းဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်ဖြစ်လာတယ်။ ရခိုင်မှာ ရောက်နေတဲ့မူ ဆ လင်တွေ က တကယ် တ မ်းကြတော့ ထူး ခြားစွာဝေးလံ တဲ့ A နောက် ဘ က် A ပိုင်း (ပါကစ္စ တ န် ) ကိုAားပေးထောက်ခံခဲ့ပြီး နယ်မြေနီးစပ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို နည်းနည်းလေးမှ Aထောက်Aကူ မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲA့  စ္စလမ်ဘာသာကို ပိုပြီး သဘောကျနှစ်သက်လို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှေ်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ (သို့) စစ်တကောင်း မူဆလင်တွေAပေါ် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တတွေကို သူတို့နိုင်ငံသားAဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက် ပြီး သူတို့ကို သစ္စာဖောက်တွေAဖြစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆံကြတယ်။ ယခုထက်တိုင်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး၊ ဖြေလည်း မဖြေပျောက်နိုင်လောက်ေAာင် နာကျည်းနေကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း သူတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပြန်ဝင်လာဖို့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘင်္ဂါလီ (သိ)ု့ စစ်တကောင်းမူဆလင်တွေဟာလည်း ဒီလူတွေနဲ့ လူမျိုးချင်းAတူတူပါပဲ။ ဒီနေရာကပဲလာပြီး ဘာသာစကားချင်းလည်း Aတူတူပါပဲ။ မျိုးနွယ်စုချင်းလည်း မကွာခြားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ AဲဒAီချိန်မှာ Aကယ်၍ ခင်ဗျားရဲ့ မိဘ (သို့) ဘိုးဘွားတွေက ပါကစ္စတန်ကို ထောက်ခံတယ် ဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လက်သင့်မခံပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတော်တော်များများဟာ မကြာသေးခင်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ကို ခိုးဝင်ပြီး ကြောက်ခမန်းလိလိ ဒုက္ခသည်စခန်းကြီးတွေ ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငAံစိုးရ က Aဲဒီဒုက္ခသည်တွေကို AကူAညီပေးမဲ့ နိုင်ငံခြားAထောက်Aကူပေးတဲ့ AဖွဲA့  စည်းတွေကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရောက်နေတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ သူတို့Aတွက် မှတ်ပုံတင်လိုAပ်နေခဲ့တာပေါ့။ ပြီးတော့ “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ Aမည်ကို တည်ထွင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ Aိန္ဒိယနိုင်ငံတို့Aကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ပါကစ္စတန်ကို ဘာလို့ မကြည့်ချင် မမြင်ချင်ကြလဲဆိုတော့။ Uပမာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဦးရေ (၂၈)ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေ ယခုဆို (၉)ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့တယ်လေ။ Aဲဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲ?။ ဟိန္ဒူတွေဟာ Aကြိမ်ပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်။ နိုင်ငံထဲကနေထွက်ပြေးေAာင်လည်း ခြိ်မ်းခြောက်တာတွေ၊ ဖိAားပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တုန်းက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆိခ်ဘာသာဝင်ဦးရေ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ ယခုဆို (၁)ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတော့တယ်လေ။ Aိန္ဒိယ နိုင်ငံက ၁၇၉၀ မိုင်ရှည်တဲ့ သံ မ ဏိ ထ ည် နဲ့ တ ည်ဆောက် ထားပြီးသံ ဆူး ကြိုးတွေ နဲ့ ကာရံ ထားတဲ့ခံ တ ပ် သ ဖွ ယ်နယ်နိမိတ်စည်းရိုးကြီးကို ရှည်လျားလှတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှေ်နယ်နိမိတ်တလျှောက်လုံးမှာ တားဆီးတည်ဆောက်ထားခဲ့ တယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Aစ္စလာမ်ဘာသာဝင် Aကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ Aိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာ Aလုပ်Aကိုင်လာရှာတဲ့ နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့လာမဲ့ သူတွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်လောက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူလှိုင်းကြီးတွေနဲ့ တခြားမူဆလင်တွေ ၀င်မလာနိုင်ေAာင် (သို့) ကင်းဝေးေAာင် ဖြစ်ပါတယ်။ Aဲဒီလိုပဲ Aိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ် မိုင် ၁၀၀၀ တလျှောက်လုံးကိုလည်း မူဆလင်Aကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ ကင်းလွှတ်ေAာင် Aဓိကထားပြီး Aဲဒီစည်းရိုးကြီး တွေကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်မှာတော့ Aိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ နယ်ခြားစည်းရိုးရယ်လို့ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ Aာဏာရှင်ခေတ်AတောAတွင်း ရိုဟ င် ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံး ဟာ ၁၉၆၂ ခုနှ စ်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းAာဏာသိ မ်း ခဲ့ချိ န်မှာ ပျောက် ကွယ်သွားခြဲ့ ပီး၁၉၇၂ ခုနှ စ်မှာ ပြန်ြ ပီးပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ် ။ မူ ဆ လင် ထုက ဒီ န ယ်မြေကိုသူ့  သ ဘောနဲ့  သူAစ္စ လာမ်ြ ပည် န ယ် A ဖြစ် တောင်းဆိုမှုကို ထပ်မံပယ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ တဖန်ပြန်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်ရော။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ မူဂျာဟစ်သူပုန်တွေ AကြီးAကျယ်တိုက်ခိုက်ကြစU်က နည်းနည်းပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။ (ဒီပွဲမှာ “နေ၀င်းစတိုင်”ကတော့ သိတဲA့တိုင်းပဲ၊ သွေးထွက်သံယိုAပြင်းAထန်ပွဲကြမ်းတာမို့၊ AသေAပျောက်ကတော့ Aများကြီးပဲ)။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာလဲ ဒုတိယAကြိမ် မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ Aပြင်းAထန်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ တစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၃)ရက်နေ့မှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်က ဘင်္ဂါလီတပ် (Bengali V-Force)က ဌာနေခံ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (၃၀၀၀၀)ကျော် Aမြောက်Aများကို AစုလိုကA်ပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် Aထိမ်းAမှတ်Aနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးAဖွဲ့ (RLO)က ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (၅၀၀၀၀)ကျော်က မောင်းတောမြို့ကို Aလျင်Aမြန် ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ပထမဦးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကြီး တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေကို မီးရှို့တယ်။ Aဲဒီနေရာမှာနေထိုင်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးမှန်သမျှ Aကုန်လုံးကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမျိုးနွယ်တုံးေAာင် သုတ်သင်တဲ့ ဒီAစီAစU်ကို ဌာနေခံ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ Aင်Aားဖြည့်ထားတဲ့ မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့က ရပ်တံ့ေAာင် တားဆီးကာကွယ် နိုင်ခဲ့တယ်။ Aဲဒီကတည်းက မြန်မာ့တပ်မတော်တပ်မများက Aမြဲတမ်းတပ်စွဲပြီး၊ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တို့ရဲ့ နောက်ထပ် လူမျိုးတုံးေAာင် သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခများစွာပေးလာခဲ့တာယခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့Aချိန်Aထိတိုင်ေAာင်ပါပဲ။ ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးAဖွဲ့ (RLO) ရဲ့ Uက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Aာမက်ရှား (Ahmed Shah)ရဲ့ ဟောပြောချက်တိပ်ခွေကို Aခမဲ့ဖြန့်ဝေတယ်။ Aဲဒီဟောပြောချက် ထဲမှာ မောင်းတောမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မူဆလင်မကိုးကွယ်တဲ့သူမှန်သမျှ Aားလုံးကို မြို့ထဲကနေ မောင်းထုတ်ပစ်ရမယ်၊ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးသုU်းေAာင် သတ်ဖြတ်သုတ်သင်ရမယ်၊ Aဲဒီနေရာမှာ မူဆလင် ဘာသာဝင် မဟုတ်သူမှန်သမျှ Aားလုံးကို ရှင်းပစ်ရမယ်လို. တိုက်တွန်းညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးAဖွဲ့ (RLO)ကလည်း သောင်းပေါင်းများစွာသော လှုံ့ဆော်စာရွက်များကို ဖြန့်ချိကြတယ်။ Aဲဒီထဲမှာ ရခိုင်မိန်းကလေးချောချောလေးများရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ယောက်ျားများ သွားရည်ကျလောက်ေAာင် ညွှန်းပြီး မြန်မာပြည်ကိုAရောက်လာကြဖို့ နှိုးဆော်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာAစာရေစာပေါများပြီးရိုဟင်ဂျာယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်Aမျိုးသမီး(၄)ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ ဒီမိန်းကလေးတွေကို Aစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ေAာင်ပြောင်း ပစ်ရမယ် လိ.ု စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ထားတယ်။ ပြီးတော့ Aဲ ဒီေ ဒသကို(မူ ဆ လင် တို့  A တွ က်သာဖြစ် တဲ့ A စ္စ လာမ်ြ ပည် န ယ် ) ဟု ထူေ ထာင်ရေးဆိုတဲ့ မဟာAစီ A စU်ြ ကီးကိုပါဝင်ကူညီကြဖို့ သင့်ကြောင်း ရေးသားထားတယ်။
Aာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ Aယ်လ်ကေဒါနဲ့ တာလီဘန်တို့ရဲ့ ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများနဲ့ လက်နက်ကြီးများ Aသုံးချသင်တန်း များစွာသောရိုဟင်ဂျာများဟာစစ်ပွဲAတွင်းAာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖမ်းမိနေခဲ့ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်Aကြမ်းဖက်သင်တန်းစခန်းတွေမှာရှိနေခဲ့ ကြတယ်။ နိုင်ငံများစွာမှ ထောက်လှန်းရေးAကူAညီများရဲ့ သတင်းပို့ချက်များAရရခိုင်မှ ရိုဟင်ဂျာAမျိုးသားAဖွဲ့Aစည်း (ေAAာရ်Aန်Aို)မှ Aသင်းဝင်Aယောက် (၉၀)ဟာ လစ်ဗျားနဲ့ Aာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လAတွင်း ကျင်းပတဲ့ ကြေးစားစစ်သည်သင်တန်း၊ ဖောက်ခွဲပစ္စည်း ကိုင်တွယ်မှုသင်တန်းနဲ့ လက်နက်ကြီးတွေ ကိုင်တွယ်မှုသင်တန်းတွေကို တက်ရောက်ဖို့ ရွေးခြယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆို တယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ မေလမှာ “ေAAာရ်Aန်Aို” Aဖွဲ့Aစည်းမှ Aသင်းဝင်(၅)ယောက်ဟာ Aယ်လ်ကေဒါကိုယ်စားလှယ် များနဲ့Aတူ Aဆင့်ြ မင့်A ရာရှိများ သင် တ န်းကိုတက်ရောက် ခဲ့ တ ယ် ။ သူ တို့ တွေ ဟာစစ် A တွ က်လို A ပ် တဲ့ ပ စ္စ ည်း တွေ ၊ လက် န က်တွေ နဲ့ ငွေကြေးAထောက်Aပံ့တွေကို Aိုစမာဗင်လာဒင်က ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ မြောက်များစွာသော ဆက်သွယ်မှုများနဲ့ Aထောက်Aပံ့များကို ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်း၊ Aင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ Aခြားနိုင်ငံတွေမှ Aစ္စလာမ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲAဖွဲ့များမှ ရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။
လူတိုင်းက ဆိုးရွားစွာ ဆက်ဆံကြတာကို ခံနေရတဲ့ သနားစရာ ရိုးသားတည်ငြိမ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သူတွေAဖြစ် သူတို့ကို Aထင်မှားပြီး ယုံကြည်လာေAာင် ရိုဟင်ဂျာတို့က သတင်းမီဒီယာကို လှည့်စားခြင်း Aခုဆိုရင် မကြာသေးခင်က ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေAပေါ် ရက်စက်စွာ ပြုခံရပုံကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို စူးစမ်းတွေ့ရှိကြတဲ့ လူတွေဟာ ဆိုးရွားတဲA့ရာတွေကို ကြားခဲ့မြင်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများဟာ Aခုချိန်မှာတော့ ဒါတွေAားလုံးဟာ လိမ်လည်မှုတွေ၊ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ လှည့်ဖြားထားတဲ့ Aရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိမြင်လာကြခဲ့ရပါတယ်။
Aဲဒီ ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ Aလောင်းများAဖြစ်ယူဆထားရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာတကယ်တော့ Aင်ဒိုနီးရှားမှာကြီးမားလှတဲ့ ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စူနာမီခေါ်ရေလှိုင်းကြီး ကျရောက်တုန်းက ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Aဲ ဒီA လောင်းတွေ Aစု လို က်A ပုံလို က်ြ ကီးရဲ့  ဓာတ် ပုံ ကို ရခိုင်ြ ပည် န ယ် မှာ သေတဲ့ရို ဟ င် ဂျာAလောင်းတွေ A ဖြစ် လူတွေ Aထင်မှားေAာင်ယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Aဲဒါထက်ပိုဆိုးပြီးကြောက်ရွံ့စရာစက်ဆုတ်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကြတော့ နောက်ဓာတ်ပုံတွေက နိုင်ဂျီးရီးယမ်းမူဆလင်တွေက နိုင်ဂျီးရီးယမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်ပြီး မီးပုံရှို့ထားတဲ့ ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်Google မှာရှာကြည့်မ ယ် ဆို ရ င်တော့ ကောက် ကျစ် စွာ Aသုံး ချထားတဲ့လှ ည့်ြ ဖားမှုတွေ ကို ကမ္ဘာAနှံ့ မှာ ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။(Burma, Myanmar, Jihad, Genocide, Rohingya (ရိုAင်ဂျာ), Fake photos, Media Manipulation) စသဖြင့် စတဲ့စလုံးတွေ သုံးပြီးရှာဖွေပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ဘာ့ကြောင့် မပေးသင့်သလဲ? ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တစ်သီးတစ်ခြားမျိုးနွယ်စုAသွင်နဲ့ နိုင်ငံသားပြုခွင့် လိုချင်ပေမဲ့ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေစိုးမိုးAုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ပါးလက်ေAာက်ခံAဖြစ် နေလိုကြတာမဟုတ်ဘူး။ သူတပါးနိုင်ငံထဲမှာ ကိယု့်ထီး ကိုယ့်နန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံငယ်Aဖြစ် ခပ်ရင့်ရင့် ရပ်တည်ပြီးသာ နေချင်ကြတာ။ သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်လူမျိုး တွေလို ဇာတိမွေးရပ်မြေရဲ့ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ သမိုင်းဇာစ်မြစ်တွေ၊ ရိုးရာနဲ့ယU်ကျေးမှုတွေလဲ မရြှိ ကပါဘူး။ သူ တို့  Aဲဒီကို သာရောက်နေတယ် ။ ရခိုင်ြ ပည် န ယ် နဲ့ ပ တ် သ က် တဲ့ သ မိုင်း ကြောင်းနဲ့  ရိုး ရာနဲ့  ယ U်ကျေးမှု ဆို င်ရာAထောက်Aထားပြစရာ လဲ မရှိပါဘူး။ ဒါတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုလည်း တစ်စက်မျှ မရှိပါဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ မတူတဲ့ Aချက်တွေရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ရခိုင်တွေဟာ ဒီပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေချည်းသာ သီးသန့်စစ်စစ်တည်ရှိနေရ မယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးတယူသန်ဝါဒ မရှိကြဘူး။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတစ်မျိုးတည်းပေါ်မှာပဲ လွဲမှားစွာ Aယူသီးပြီး တခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာကို ဘာသာရေးစစ်တိုက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်မျိုးလဲ လုံးဝ မရှိကြဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ကိုသာ လိုချင်ကြပေမဲ့ သူတို့ဝန်းကျင်မှာ တခြားလူမျိုး၊ တခြားဘာသာဝင်တွေရှိနေတာကို မပျော် ရွှင်မရှုစိမ့်ကြဘူး။ တခြားလူမျိုးတွေ ရိုးရာဘာသာ သာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်တွေ ကျင်းပဆင်နွှဲကြတာကိုလည်း မနှစ်မြို့ကြဘူး။ ရိုဟ င် ဂျာတွေ နိုင်ငံသားAဖြစ် ခံ ယူချင်ြ ကတာက သူ တို့  A တွ က်ကို ယ်ပို င်မူဆ လင်ြ ပည် န ယ် A ဖြစ် တောင်းဆိုဖို့ြ ဖစ် တ ယ် ။ Aဲဒီပြည်နယ်ကလည်း မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို Aမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို Aမြန်ဆုံးသတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်တော့မူဆလင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့တတွေAတွက်လွတ်လပ်ရေးကြေငြာမှာဖြစ်တယ်။တစ်နည်းပြောရရင် နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားပြုမှုပုံစံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားပြုမှုလို့ မြင်ထားကြတယ်။ Aကယ်၍ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသာနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကြီးမားလှတဲA့န္တရာယ်ဆိုးကြီးဖြစ်လာဖို့ရယ်လူတွေပိုပြီးသုတ်သင် သတ်ဖြတ်လာဖို့ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် သူတို့ရှိတဲ့ နေရာကို သန့်စင်စေဖို့ မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို မောင်းထုတ်ပစ်ဖို့ရယ် ကြွ င်း ကျန်နေတဲ့မူ ဆ လင် မ ဟု တ်သူတို့  ရဲ့ သမိုင်း ကိုဖျက် ဆီး ဖျောက် ဖျက် ဖို့  ရ ယ် ဟာ၊ မူ ဆ လင် တို့  ရဲ့ တာဝန်ြ ဖစ် တ ယ် လို့  ယုံကြည်ထားကြလို့ဖြစ်တယ်။ Aဲ ဒီက မူ ဆ လင်တွေ ဟာAသိ A မှ တ်ြ ပုထားတဲ့သမိုင်း Aထောက် A ထားတိ တိကျကျရှိခဲ့ တဲ့ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် လူမျိုးတွေ နဲ့ ယU်ကျေးမှုတွေကိုရော (Uပမာ-မြောက်ဦး) လို ကမ္ဘာ့Aဆင့် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဒေသတွေကိုပါ ဖျက်ဆီးနေကြပါ တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတိAု့ တွက် မွေးဖွားလာခဲ့ရာမှ ဘ၀တလျှောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်သွားပုံက တခြားလူမျိုး၊ တခြားဘာသာ ယုံကြည်သူတို့နဲ့ Aတိုး Aဆု တ်ညှိနှို င်း မှု မ ရှိဘဲတယူ သ န် တ င်းမာနေကြဖို့ နဲ့ သူ တို့  နဲ့ “လူ မျိုး၊ ဘာသာ”မတူ သူတို့  ရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံ နဲ့ AတွေးAခေါ်AယူAဆမှန်သမျှကို လက်ခံနားလည်လိုစိတA်လျင်းမရှိဘဲ နေသွားကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို မေးခွန်းထုတ်နိုင်ခြင်းလဲ ခွင့်မပြု၊ ဝေဖန်ခွင့်လဲ မရှိဖြစ်နေတယ်။ မူဆလင်ဘာသာ မကိုးကွယ်သူမှန်သမျှကို သူတို့ ဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့ သူတို့ယူဆထားတယ်။Uပမာ-မူဆလင် မကိုးကွယ်သူမှန်သမျှကို သတ်ချင်တိုင်းသတ်ခွင့်ရှိတယ်။ မူဆလင်ကိုးကွယ်သူမဟုတ်တဲ့ မိန်းမတွေကိုလည်း မုဒိန်းကျင့် ချင်တိုင်း ကျင့်ခွင့်ရှိတယ်။ မူဆလင်မဟုတ်သူများAပေါ်ထားရှိတဲ့ Aဲဒီသဘောထားကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်Aမျိုးသမီးတွေ မုဒိန်းကျင့်ခံရမှုနှုန်း Aလွန်ပင်မြင့်တက်နေပါတယ်။ Quran 4.24 “All married women are prohibited to you, except those whom your right hand possesses (a way to say “captured”) as the prisoners of war, who Allah has assigned to you.” သူတို့သိထားတာက Aစ္စလာမ်ဘာသာကို စွန့်ခဲ့သူဆို သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်တယ်။
Al-Azhar (Cairo) Islamic Academy endorsed manual of Islamic Law, Umdat al-Salik (P.P 595-96) states: “Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst….. Whenaperson who has reached puberty and is sane, voluntarily leaves Islam, he deserves to be killed. In such case, It is obligatory ….to ask him to repent and return to Islam. If he does it is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.” သူတို့ရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်ထားမှုက သူတို့ကို မူဆလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ မပေါင်းသင်းကြဖို့ တခြား ဘာသာတို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတော်တွေ၊ Aခမ်းAနားပွဲတွေကို မတက်ရောက်ဖို့နဲ့ AသိAမှတ်မပြုကြဖို့ ညွှန်းကြားတယ်။ Qur’an 5:51 ”O you who believe, take not the non-believers (Jews, Christians, Buddhist, Hindu, etc.) for friends. They are friends of each other. And who amongst you takes them for friends then you are indeed one of them.” ရှေးခေတ်ကပင် “Aလ္လာသခင်”ညွှန်ကြားတဲ့ ဘာသာရေးစကားတွေကို ကြားသိထားကြတယ်။ “Aလ္လာသခင်”ကို ယုံကြည်လို့ သူ တို့  A သက် ရှင်ေ နကြတာဖြစ် တ ယ် တဲ့ ။ “Aလ္လာ”ကိုAသနားခံတောင်းပန် လို့  သာရမယ် ။ သူ့  စ ကားတွေ ကို မေးပိုင်ခွင့်ရော၊ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ပါ မရှိစေရ”လို့ ဆိုထားတယ်။ Qur’an 8:55 “Surely the vilest of beasts in Allah’s sight area those who disbelieve.” Qur’an 8:39 “So, fight them till all opposition ends and the only religion is Islam.” Qur’an 9:59 “The infidels should not think that they can get away from us. Prepare against them whatever arms and weaponry you can gather, so that you may terrorize them. They are your enemy, and Allah’s enemy”. Qur’an 9:29 “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth.” Qur’an 48:29 “Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers, and merciful among themselves.”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓတရားဒေသနာကျမ်းများစွာတွင် Aထက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားဟောကြားချက်များနှင့် သဘော သဏ္ဍာန်တူညီသော Aချက်များ လုံးဝ မပါရှိချေ။
တခြားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ယU်ကျေးမှုများလည်း ထို့နည်းတူစွာ ဖျက်ဆီးခံကြရပုံများ Aာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ Aလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ ကျောက်တောင်ကမ်းပါးယံကြီးပေါ်မှာ ထွင်းထုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ဆင်းတု တော်ကြီးနှစ်ဆူကို တာလီဘန်တို့ ဗုံးနဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကို သတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လား။ Aဲဒီဆင်းတုတော် တွေဟာ ဗုဒ္ဓယU်ကျေးမှုတွေထဲက ရှေးAကျဆုံးAပါA၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ Aာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ AခြားAရပ်ဒေသတွေမှာလဲ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ကျောက်ကမ်းပါးယံမျာ ထွင်းထုထားတာတွေရဲ့ Aပျက် AစီးAကြွင်းAကျန်တွေရှိခဲ(့ သို့)ရှိနေဆဲပါ။ ပါရှား (ယခု Aီရန်)နိုင်ငံရဲ့ Aထူးသဖြင့် Aရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင် Aာရပ်မူဆလင်တို့ စီးနင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မှုမတိုင်ခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူထု၊ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေ၊ တရားထိုင်ကြတဲ့ ဂူတွေဟာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်Aာဖဂန် န စ္စ တ န် နဲ့ ပါကစ္စ တ န် တို့  မှာ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ မရြှိ ကတာလဲ ဆိုတော့ Aခု ဆို Aာဖဂန် န စ္စ တ န် မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ထုAပျက်AစီးAကြွင်းAကျန်တောင်တစေ့မှမကျန်တော့ပါဘူး။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ယခုကြွင်းကျန်နေတဲ့ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်တချို့ကို ဖျက်ဆီးနေပါပြီ။
Aဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စီးနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ Aဲဒီမှာနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ကြည်ညိုလေးစားလှတဲ့ ဗုဒ္ဓတရားကိုင်းရှိုင်းကြသူတွေလို့ မှတ်ယူကြတော့ မရှုစိမ့်ခဲ့ကြဘူးလေ။ မူဆလင်ကိုးကွယ်သူ တွေလည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ ဗု ဒ္ဓ ၀ါဒAပေါ် လုံး ၀ကိုမလေးစားမငဲ့ကွက်ဘဲသူ တို့  တ တွေ နဲ့ A တူ တွဲေ နစရာမလိုဘူး လို့ စU်းစားဆုံး ဖြတ် ခဲ့ြ ကတယ် ။ ဒီ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုAတင်းAဓမ္မနှင်ထုတ်ပြီးတစ်ယောက်မကျန်သတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်Aဲဒီနောက်ရှေးဟောင်းဘာသာရေးဒေသတွေ လဲ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ Aဲဒီမှာ Aစ္စလာမ်ဘာသာ မဖြစ်တည်သေးခင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကပင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုတဲ့ Aရပ်မှာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ရှည်ကြာစွာ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ သမိုင်းကြောင်းနှငA့် တူ စတင်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပါဠိကျမ်းဂန် များAပေါ် Aခြေခံပြီး ပြောရရင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ရှေးခေတ်ဘင်္ဂါ(Bengal or Vanga)ဒေသမှာ ဘီစီ (၃)ရာစုနှစ်မှစပြီးေAဒီ (၁၂)ရာစုAထိ ဆက်တိုက် Aဆင့်Aမြင့်ဆုံးကိုးကွယ်ရာဘာသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော်ြ ကားခဲ့တဲ့ တရု တ်နို င်ငံက ဗု ဒ္ဓ ဘာသာစာသင် သားဘု န်း တော်ြ ကီးများဟာAဲ ဒီမှာ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာစာပေကျမ်းဂန်တွေ ကို သွားရောက်ဆည်းပူးခဲ့စU်ကAသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့AထဲမှာAဲဒီAရပ်မှာများစွာသောAလွန်ကြီးမားလှတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ Aနုစိတ်ကျောက်ဆစ်လက်ရာတွေနဲ့ Aုတ်ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေ၊ တရားကျင့်ကြံAားထုတ်ကြတဲ့ ကျောက်ဂူတွေနဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘုန်းတော်ကြီးတွေရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုနေရာကို ဟိန္ဒူစစ်တပ်ကြီးများ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီး Aုပ်ချုပ်တဲ့Aခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာ စစ်တကောင်းဒေသမှာရှိ တဲ့ တောတွေတောင်တွေ ထဲကို ပြေးဝင် ခို လှုံနေခဲ့ရ ပါတယ် ။ (ထိုစ U် က ဟိန္ဒူတွေ ဟာဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ရဲ့ စိ တ်ကူး စိ တ်သ န်း၊ ပြုမူနေထိုင်ပုံတွေနဲ့ မတူကြလို့ နားလည် လက်ခံလိုစိတ် မရှိကြပါဘူး။) ဒီ့နောက်တော့ မူဆလင်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သူတွေ ၀င်ရောက်လာပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ ဘုရားပုထိုးတွေကို ဖျက်ဆီးကြ၊ ထောင်ပေါင်းများ စွာသော ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေသနေ လူထုကို Aစ္စလာမ်ဘာသာကို Aတင်းAဓမ္မပြောင်းပြီး ကိုးကွယ်စေပြီး၊ Aစ္စလမ်ဘာသာမ၀င်သူတွေကို သတ်ပစ်ကြပါတယ်။
ထိုန ည်းတူ စွာ ပါပဲ ၊ ယခု A ချိ န်A ခါမှာမောင်တောနဲ့  ဘူး သီးတောင်ဒေသတွေ မှာ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဘု န်း တော်ြ ကီးကျောင်းတွေ ၊ ဘုရားပုထိုးကျောင်းကန်တွေAားလုံးလောက်နီးနီးဟာဖျက်ဆီးထားပြီးပါပြီ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလဲသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မောင်းထုတ်ခြင်းတွေလုပ်ထားခဲ့ပါပြီ။ ပြီးတော.ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် လူထြု ကီးရဲ့ ဒေသကိုဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် A များစု ရှိ ခဲ့ ရာကနေဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် မ ရှိသ လောက်ြ ဖစ်ေAာင် ပြောင်းပစ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်…Aကယ်၍ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးလိုက်ရင်၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်AမွေAနှစ် နေရာဖြစ်တဲ့ မြောက် ဦးမြို့ ဟာတစ်နေ့နေ့ မှာ သူ တို . ရဲ . ထိ န်း ချုပ် မှုလ က်ေAာက် ကျရောက် သွားမှာဖြစ်ြ ပီး၊ လုံး ၀AပြီးAပိုင်ဖျက် ဆီး ခံ ရ မှာသေချာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးAစU်Aဆက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သမိုင်းကြောင်းဇစ်မြစ်ရှိခဲ့တဲ့ ယU်ကျေးမှုနဲ့ လူထုဟာ သူုတို့ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမြေ၊ သူတို့ရဲ့Aိမ်ယာ၊ ခြံမြေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သက်သေခံAထောက်Aထားတွေကို ဘာကြောင့် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး ခံကြရမှာလဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလုံးဝနိုင်ငံသားခံယူခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ သူတို့ဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့လဲမထိုက်တန်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်လိုတာမှ မဟုတ်တာ။
တကယ်နိုင်ငံသားစစ်စစ် တစ်ယောက်ဆိုတာဟာ ယောက်င်္ကျာမိန်းမမရွေး၊ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ တန်းတူရည်တူ (Aဆင့်Aတန်းတူ၊ ရည်ရွယ်ချက်တ)ူ Aချင်းချင်းညီAစ်ကို မောင်နှမလို သဘောထားကြပြီး Aတူတကွလက်တွဲ၊ Aလုပ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ ဆန္ဒမျိုးလဲရှိရမယ်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး Aသိတရားဖလှယ် နိုင်ကြရမယ်။ Aချင်းချင်း လေးစားမှုလည်း ရှိရမယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံသားAားလုံးAတွက် မိမိတို့နိုင်ငံ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေးကို တည်ဆောက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်၊ Aကယ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူနည်းစုက မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုထဲကို ၀င်ရောက်လာပြီးဒီလိုမျိုးတောင်း ဆိုကြရင် ဘယ်လိုစU်းစားမလဲ ….. Uပမာ....တကယ် လို့  ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ က လွ န်ခဲ့ တဲ့ နှ စ်ေ ပါင်း(၅၀) လောက် က ဘင်္ဂ လာဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံထဲသို့  လူAင်Aားများစွာနဲ့ချU်းနင်းဝင်ရောက်ပြီး၊ Aဲဒီက မြို့ရွာတချို့ထဲက မူဆလင်ကို မောင်းထုတ်မယ်၊ သတ်ပစ်မယ်။ ပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နယ်မြေAဖြစ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကော ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ? မူဆလင်စစ်တပ်ကြီး တွေက၊ Aမြန်ချီတက်လာပြီး Aဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တစ်ယောက်မကျန် Aကုန်သတ်ပစ် ကြမယ်မဟုတ်လား။
ဘာကြောင့်တချို့သော သတင်းထောက်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာဘက်ကို ခပ်ပါပါလိုက်ကြသလဲ? သတင်းထောက်Aများစုဟာ စာရေးဆရာတွေသာများတယ်။ သမိုင်းသုတေသီတွေမဟုတ်ကြဘူး။ စာဖတ်သူ စိတ်ပျော့ငြိသွားစေနိုင်တဲ့ ရုန်းကန်မှုတိုက်ပွဲတွေ၊ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုရှာကြဖွေကြရတယ်လေ။ တချို့သတင်းထောက်တွေကမြန်မာပြည်Aကြောင်းမြန်မာလူမျိုးတွေAကြောင်းသိကြောင်းဒုနဲ့ဒေးမူဆလင်ရေဦးရေAမြောက်Aများ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို နိုင်ငံကူးဝင်လာတာတွေကိုတော့ သိကြတဲ့ သူရှားလှပါတယ်။ စစ်တပ်AကြီးAကဲဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ ရွေးကောက်ထားတဲ့ Aစိုးရတစ်ခုရဲ့စနစ်ကို Aုပ်ချုပ်ရတာကဘယ်တော့မှ ယုံကြည်လို.မရတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လဲ Aခုရိုဟင်ဂျာသတင်းဇာတ်လမ်းဟာ တကယ်Aစစ်Aမှန်လို သတင်းမီဒီယာတွေAပေါ်ထည့်လို့ လွယ်တာပေါ့။ စိတ်ထဲစူးနစ်ေAာင်ခံစားမှု ရသွားစေမဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းလှတဲ့ သတင်းစာAရေးAသားနဲ့ဓါတ်ပုံတွေလည်းပါတာပေါ့။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Aံ့မခန်းဝါဒဖြန့်မှုတွေ၊ သတင်းမီဒီယာကို သုံးပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လှည့်ဖြားမှုတွေ လုပ်ကြံဇာတ်ထွင်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ဆွဲယူသုံးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ သတင်းလိမ်တွေကို ယုံတဲ့လူယုံနေကြတော့၊ တကယ်Aဖြစ်မှန်AခြေAနေကို သိကြတဲ့၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လို Aနောက် နိုင်ငံသားတွေက တော်တော်လေးကို စိတ်Aနှောက်Aယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ Aဲ ဒီလို ယုံ လွယ်မိတဲ့ လူတွေ က မြန် မာနိုင်ငံA ကြောင်းကိုပဲတော်တော်လေးသိ သ ယောင်ယောင် နဲ့ ချက် ချင်းAရင် စ လိုဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် ရ ခိုင်လူမျိုးတွေ ကို ၊ လူ မျိုးရေးစိ တ်ြ ပင်းတဲ့သူေ တွ ကြမ်းရမ်းတဲ့ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဝင် လူဆိုးတွေ စသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ပြီးAပြစ်တင်ကြပါလေရော။ ကျွန်တော်တို့လို Aကြောင်းသိတဲ့ သူတွေAတွက်ကတော့ ရှင်းပြလိုက်ရင်သဘောပေါက်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ တည်ကြည်ခိုင်မာတဲ့ Aဆင့်Aတန်းဝင် လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် သူတို့မှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ သူတစ်ပါးAပေါ် သနားကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်ရင်း စေတနာရှိတယ်။ စိတ်ရှည်တယ်၊ AတွေးAခေါ်ကြံဆပြုမှု ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လူမျိုးရပ်တည်မှုလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ဌာနေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာရော၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ သမိုင်းမှာပါ။ (တခြားဘယ်မှာမှမရှ)ိ ထင်းရှားလှတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက ရခိုင်လူမျိုးတွေ လုံးဝဆိပ်သုန်းသွားစေဖို့ရယ်၊ ရခိုင်သမိုင်းကို ဖျက်ဖို့ရယ်Aတွက်၊ Aားစိုက်ခွန်စိုက်ကြိုးပမ်း နေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်ဒေသမှာရှိရှိသမျှသော မူဆလင်တွေကတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ Aကြောင်းသိနားလည်ေAာင်လေ့လာကြည့်ဖို့၊ ခင်မင်လေးစားဖို့ ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းဖို့ စတာတွေကိုလုပ်ဖို့ လက္ခဏာတချက်မှ ရှိမနေကြဘူး။ AဲဒီAစား၊ ကမ္ဘာA၀ှမ်း မူဆလင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေAပြင် ဒေါ်ေAာင်ဆန်းစုကြည်လို လူမျိုးကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်စိန်ခေါ်ဦးမဲ့ ပုံစံရှိနေပါတယ်။
ညှိနှိုင်းမှုလက်မခံတတ်သူတွေကို ညှိနှိုင်းလို့ မရနိုင်မှန်း၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေက သိနေကြတာကြောင့…်…….
သတင်းထောက်တချို့တလေက Aခန်းထဲမှာေAာင်းနေတဲ့ ဆင်ကြီးAကြောင်း ကိုထုတ်ဖော်ရေးချင် နေကြပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ ယိုးဒယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုနိုင်ငံ Aင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံ၊ လက်ဘနွန်၊ နိုက်ဂျီးရီယားနဲ့ Aီဂျစ်နိုင်ငံတွေရှိနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေရယ်၊ Aီရန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့(Bahai and Zoroastrians) တွေ မှာ ဘာတွေြ ဖစ်နေကြတယ် ဆို တာရဲ့ နောက် ကွယ်မှာ ရပ် တ ည်ပေးတဲ့တ ကယ် A င် Aားစု ဟာဘယ် သူေ တွ လဲဆိုတော့ “Aစ္စလာမ်”တွေပဲပေါ့။ Aဲဒီဖြစ်ရပ် တွေကနေ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဆွဲလိုက်တာကတော့ ဘုရားမရှိတော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ မူဆလင်ကို မယုံကြည်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ Aားလုံးသော မူဆလင်မဟုတ်သူမှန်သမျှAပေါ် ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွှဲဖို့ Aားပေး Aားမြောက်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ရခိုင်ြ ပည် န ယ် မှာ ရှိတဲ့ မြို့တွေ ရွာ တွေ မှာ ရောက်နေတဲ့Aဓိ က ရိုဟ င် ဂျာAမျိုးသားတွေ နဲ့ သူ A နီးကမိ န်း မတွေ ဟာမဖြစ်မနေခေါင်းမြှီးခြုံထားရမှာဖြစ်တယ်။ ၀တ်ရုံပုဝါကို ခေါင်းမှာ သေသေချာချာ မခြုံထားရင် (မူဆလင် မဟုတ်တဲ့ မိန်းမပင်ဖြစ်ပစေ ခြုံထားရမှာဖြစ်တယ်) ရိုက်နှက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူမိန်းကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့သမီးလေးတွေကို ကျောင်းမပို့ကြဖို့ ခြိမ်းချောက်ဖိAား ပေးနေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ AမျိုးသမီးတွေAပေါ် Aခြားစည်းမျU်းတင်းကြပ်မှုတွေများစွာ လုပ်နေကြတယ်။ လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ ကျောင်းတွေမှာ ရွံမုန်းဘွယ်ကောင်းပြီး၊ တရားမမျှတတဲ့ Aစ္စလာမ်စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ Uပဒေကို သင် တ န်းပို့ ချနေပါတယ် ။ Aဲ ဒီမှာ ကိုရ မ် ကျမ်းနဲ့  ဟောကြားချက်တွေ A ပေါ် မေးမြန်းခြင်း၊ ဆန်းစစ်ြ ခင်း၊ မပြုလာဖို့ ရ ယ် ၊ မူဆလင်မဟုတ်သူများကို တားမြစ်ဖို့ရယ်၊ နောက်ဆုံးဖြောက်ဖျက် သုတ်သင်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ တစ်နေ့နေ့မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ သူတို့လို Aစ္စလာမ်ဘာသာတစ်ခုတည်းသာ ရှိလာမယ် ဆိုတာတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ Aသက်Aပိုင်းAခြားမှာ ခေါင်းထဲကို ရိုက်သွင်းပေးနေကြပါတယ်။ ကိုင်း... ဒီသတင်းမျိုးတွေ Aပေါ်မှာကော ဘယ်လိုစU်းစားကြပမလဲ?
Aားလုံးသော မူဆလင်တိုင်းဟာ သူတို့နဲ့တူတာမဟုတ်ပါ၊ Aားလုံးသောမူဆလင်တိုင်းကလည်း သူတို့နည်းAတိုင်း မယုံကြည်ကြပါ။ ဟုတ်ပါတယ် Aားလုံးသော မူဆလင်တိုင်းဟာ မတူညီကြပါဘူး။ မူဆလင်Aားလုံးဟာလည်း Aစွန်းရောက် သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တို့ရှိရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ယီမင်၊ Aီဂျစ်၊ တူရကီ၊ ခူဒစ်တန်၊ Aယ်ဘေးနီးယား၊ Aင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနဲ့ တရုတ်ပြည်နဲ့ Aိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တို့ နေထိုင်ရာAပိုင်းတွေမှာ AတွေA့  ကြုံများရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွ န်ေ တာ် မှာ Aစ္စ လာမ် ဘာသာAပေါ် သဘောမတူ စ ရာတွေ့  ရှိ ပါတယ် ။ ဒါကိုဆ န်းစစ်ဝေဖန် ဖို့  လဲကျွ န်ေ တာ် မ ကြောက် ပါဘူး။ မူဆလင်ဆိုတာဟာ၊ ကိုးကွယ်စရာဘာသာရေးတစ်ခုကို လိုက်နာသူတွေဖြစ်တယ်။ Aဲဒီ ဘာသာထဲမှာ သူ့ဘာသာတရားကိုပင် ပြန်ပြီး Aနှောက်Aယှက် (ကိုယ်ရှူးကိုယ်ပတ်)ဖြစ်နေတဲ့ Aချက်တွေရှိနေတယ် ဒီတော့ AဲဒAီချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်Aနေနဲ့ ဘယ်Aချက် တွေကိုတော့ လိုက်နာရမယ်။ ဘယ်Aချက်တွေကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတာရှိရပါမယ်။
မူဆလင်Aများစုဟာ လူကို သေသည်Aထိ ကျောက်ခဲနဲ့ ပေါက်သတ်တာတို့၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာကို လုပ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာAစိတ်Aပိုင်းAချို့နေရာတွေမှာတော့ ဒီလိုလုပ်မျိုးကို Aဓိကထားပြီး လုပ်ကြပေလိမ့်မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ AခြေAနေမှာ Aစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ Aခန်းကဏ္ဍကို မသိကျိုးကျွံ လစ်လျူရှုထားလို. မရပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်သူတွေက AကူAညီပေးသင့်ကြသလဲ? သူတို့ဘယ်ကိုသွားသင့်သလဲ? တကယ်တော့ ရို ဟ င် ဂျာတွေနေသင့်တဲ့နေရာဟာ သူ တို့  ရဲ့ ဇာစ်ြ မစ်ြ ဖစ် တဲ့ ဘ င်္ဂ လာဒေ.ရ်ှနို င်ငြံ ဖစ် သ င့်တ ယ် ။ ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေခိုးဝင်နေသော်လည်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက သူတို့နိုင်ငံထဲကို နောက်ထပ်ဝင်ခွင့်ပြုဖို့ ခါးခါးသည်းသည်းငြင်းပါတယ်။ ယခုဆိုရင် ကမ္ဘာAရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ Aထောက်Aကူ ကယ်ဆယ်ရေးAသင်းAဖွဲ့တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို AကူAညီပေးတာတွေ ငတ်မသေေAာင် ကျွေးကြတာတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ.ရ်ှနိုင်ငံကိုယ်၌က ငြင်းပယ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ.ရ်ှနိုင်ငံကို ဖိAား တွန်းAားတွေပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံပေးဖို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ OIC လို့ခေါ်တဲ့ Aစ္စလာမ်နိုင်ငံများ Aဖွဲ့Aစည်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၅၇ နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ Aဲဒီထဲက Aချို့နိုင်ငံတွေဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု Aပြည့A်ဝရှိပေမဲ့၊ ယခုထက်ထိတိုင်၊ ပြည်နယ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခေါ်ယူထားဖို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့၊ မွေးစားထားဖို့ တစ်နိုင်ငံကမျှ စကားမဟကြပါဘူး။ မူဆလင်ဘာသာဝင်တူတွေကူညီဖို့ Aဲဒီ OIC နိုင်ငံတွေက ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ? သူတို့ ရှက်ဖို့ကောင်းလှပါဘိ။ Aဲဒီလို AကူAညီပေးမှုတွေလုပ်ရမဲ့Aစား၊ သူတို့တွေက၊ လှည့်ဖြားထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ သတင်းဆောင်းပါ တွေနဲ့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို မွှေနှောက်လိမ်ညာဝါဒဖြန့်ကြတယ်။ ပြီးတော့ Aဲဒီက Aစ္စလာမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဘာသာရေး စစ်မက်ပြုရန် Aပြင်းAထန် လှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ကြတယ်။ ဘုရားကင်းမဲ့နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မှန်သမျှကို ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းေAာင် ချေမှုန်း သုတ်သင် ပစ်မယ်လို့လည်း ရာဇသံပေးခြိမ်း ခြောက်နေပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ တခြားနေရာတချို့မှာ မြန်မာတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ လုပ်ငန်းတချို့ကို မလေးရှားလူဆိုးဂိုဏ်းတွေက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပါ သတ်သွားကြပါတယ်။ Aင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင် ရမ်းကားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းက မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လုနီးပါ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ Aကယ်၍သာ Aဲဒီဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုေAာင်မြင် သွားရင် Aဲဒီသံရုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး လူတွေကို သတ်ခဲ့မှာAမှန်ပါပဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှာသာ Aခြေချနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ (မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေနေတဲ့ နေရာမှာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်) မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကြားမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နေခွင့်မပြုရပါဘူး။ Aဲဒီလိုထားခဲ့မိရင်လဲ သူတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေAတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဦးတည်ချက်ကို ရောက်ေAာင်ပို့ပေးနိုင်ပြီး တခြားလူသားတွေမှာတော့ လူမျိုးတုံးသွားစေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒါမျိုးလုပ်မိရင် မမှန်ပေဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Aရာကိုသူတို့ ကိုယ်တွယ်ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Aရာကို သူတို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တော့၊ ပြဿနာတွေဖြစ်လာစေတဲ့ သူတို့ရဲ့ AခြေAနေAတွက် သူတို့မှာသာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
သူတို့တတွေဟာ တစ်နေ့နေ့မှာတော့တခြားဒါနဲ့မတူတဲ့Aမှန်တရားတစ်ခုခုကို ဖန်တီးလာနိုင်လိမ်မယ်လို့ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ Aကြင်နာမေတ္တာတရား ဆိုတာကို သိရှိနိုင်လာကြပါစေ။ by Rick Heizman, San Francisco, California, U.S.A. translated by Ko Nay Min, Yangon, Burma
SOURCES: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/DI21Df06.html http://wikileaks.org/cable/2002/10/02RANGOON1310.html http://www.asiantribune.com/?q=node/16449 http://irrawaddies.blogspot.in/2009/05/arakan-rohingya-nationalist.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/fake-photos-lies-and-muslim-killings-in.html http://www.ucanews.com/2012/08/24/govt-defiant-on-rohingya-aid-ban http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=88849 http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/1942-genocide-of-buddhists-in-maungdaw.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/07/armed-bengali-intrusion-from-bangladesh.html http://hlaoo1980.blogspot.com/2012/08/fake-photos-lies-and-muslim-killings-in.html http://hlaoo1980.blogspot.com/p/islamic-genocide-of-native-buddhists.html http://independencedayofvariouscountry.blogspot.com/2012/06/bengali-muslims-mujahid-insurgency-1948.html
BURMESE LANGUAGE TRANSLATION: ရိုဟင်ဂျာတွေ ယုတ်မာရက်စက်တယ် http://www.myanmarexpress.net/2012/04/blog-post_4442.html http://www.narinjara.com/burmese/?p=1297
SOAS BULLETIN OF BURMA RESEARCH SBBR 3.2 (AUTUMN 2005): 396-420 Ba Maw. 1958. Breakthrough in Burma, memoirs ofarevolution, 1939-46. New Haven: Yale University Press. Bennison, J.J.1931. Census of India of 1931, Volume XI, Part I, Burma. Rangoon: Government Press. Government of British Burma. 1888. Report on the Settlement Operations in Akyab District 1887-88. Rangoon: Government Press. Government of the Union of Myanmar. 1987. Rakhine State 1983 Population Census. Rangoon: Immigration and Manpower Department, Ministry of Home Affairs. Grantham, S and Lat, Maung. 1956. Burma Gazetteer: Akyab District, Volume (B). Rangoon: Government Press. Irwin, Anthony. 1945. Burmese Outpost (Memoirs ofaBritish Officer who fought in Arakan with the Arakanese V Forces during the Second World War). London: Collins. Owen, Frank. 1946. The Campaigns in Burma. London: His Majesty Stationary Office.
Phayre, Arthur. 1841. “Account of Arakan.” Journal of the Asiatic Society, 10: 629 – 712. Smart, R.B.1957. Burma gazetteer: Akyab District, Volume (A). Rangoon: Government Press. Talish, Shihabuddin. 1907. “The Frengi Pirates of Chatagaon.” Jadunath Sakar (tr.). Journal Asiatic Society of Bengal (3): 419-425 Tha Gyaw, Bonebauk. 1971. Tawhlanyay-khayeeway (On the Road to Revolution). Rangoon: Thandar Aung Sarpay Ba Tha. 1960. “Rowengyas in Arakan.” The Guardian Magazine, 7(5): 33-36 Charter, Langhan.1938. “The Archives of Arakanese Families,” Journal of Burma Research Society (38): 34-38 Christie, Clive J. 1996. A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism. London: I. B. Tauris Publishers Furnivall, J.S. 1957. Colonial Policy and Practice. London: Cambridge University Press. Gaffar, Abdul. 1951. “The Sudeten Muslims.” The Guardian Daily, August 20, 1951, Rangoon: Guardian Press. Khin Gyi Pyaw. 1960. “Who Are the Mujahids in Arakan?” Rakhine Tazaung Magazine. Rangoon: Rangoon University Arakanese Culture Association. DEVELOPMENT OF A MUSLIM ENCLAVE SBBR 3.2 (AUTUMN 2005): 396-420 Kyaw Zan Tha, U. 1995. “Background of the Rohingya Problem.” Rakhine Tazaung Magazine. Rangoon: Rangoon University Arakanese Culture Association. Mya Win. 1992. “If We Appraise the Attempts Made to Sow Enmity against Myanmar Naing-ngan.” Working Peoples’ Daily: January 25, 1992. Yeagar, Moshe.1972. The Muslims of Burma: A Study of Minority Group. Wiesbaden.
In Burmese: HISTORY, ISSUES and TRUTH in ARAKAN
In Burmese: about the conflict in Arakan / Rakhine State, western Burma